Ukuvikela Umkhiqizo Wakho Negama Lakho Ekumaketheni Nge-imeyili Ngezitifiketi Zezimpawu Eziqinisekisiwe (VMCs) | Martech Zone
Abathengisi be-imeyili bayaqonda ukuthi umkhankaso ophumelelayo umayelana nokungaphezulu kokulethwa nokuthumela imiyalezo. Imayelana nokubandakanya amathemba nokwakha ubudlelwano abangabunakekela ngokuhamba kwesikhathi. Ngokuyisisekelo, lobo buhlobo bokwakha buqala ngodumela nokwethembela kulo mkhiqizo:
Iningi (87%) labathengi bomhlaba jikelele bathi babheka idumela lenkampani lapho bethenga umkhiqizo noma insizakalo.
Izidumo Nezethembiso Zithinta Kanjani Izinqumo Zokuthengwa Nokusebenza Kokumaketha
Kepha ukugcina ubuqotho bomkhiqizo emhlabeni oku-inthanethi akulula, ikakhulukazi uma indawo yanamuhla esongela ukuphepha kwe-cyber ishintsha ngokushesha. Ukuhlaselwa kobugebengu bokweba imininingwane ebucayi, ugaxekile, nezinye izinsongo ziyanda, futhi abalingisi ababi baya baba nolaka ekusebenziseni izizinda ezifanayo:
Amaphesenti angama-22% aphule ubunjiniyela bezenhlalo — ama-96% awo afike nge-imeyili.
Ukuphulwa kwedatha ye-2020 Verizon
Ngaphandle kwalezi zinsongo eziguqukayo, i-imeyili iyaqhubeka nokudlala indima ebaluleke kakhulu kwezokumaketha, ikakhulukazi ngemuva kobhadane lomhlaba wonke:
Ama-80% wabakhangisi aqaphele ukwanda kokubandakanya i-imeyili ezinyangeni eziyi-12 ezedlule.
Izigxobo ziphezulu, futhi izinsongo ze-imeyili azikwazi ukubeka amakhasimende okuphela engcupheni kuphela kepha zilulaza kakhulu ukuzethemba kumikhiqizo yezinkampani-ikakhulukazi uma ukuhlasela okusebenzisa isizinda esikhohlisayo empeleni kuphumelela.
Ngokubambisana, i-VMCs, i-BIMI, ne-DMARC Ithuthukisa i-imeyili Trust
Ukusiza amabhizinisi ukuvikela imikhiqizo yawo endaweni yanamuhla yosongo enamandla, iqembu elisebenzayo labaholi be-imeyili kanye nezokuxhumana lisungule Izinkomba Zomkhiqizo Zokuhlonza Umlayezo (I-BIMI). Leli zinga le-imeyili elivelayo lisebenza ngokubambisana ne- Izitifiketi Zezimpawu Eziqinisekisiwe (VMCs) ukuvumela izinkampani ukuthi zibonise ama-logo azo kumakhasimende we-imeyili asekelwayo. Ngokufana nophawu lokuhlola oluhlaza okwesibhakabhaka ku-Twitter, i-logo ekhonjiswe nge-VMC inika umamukeli ukuzethemba kokuthi i-imeyili iqinisekisiwe.
Ukuze ufaneleke ukusebenzisa i-VMC, izinhlangano kufanele futhi ziphoqelele Ukufakazela ubuqiniso bemilayezo esuselwa esizindeni, Ukubika nokuvumelana (DMARC). I-DMARC iyinqubomgomo yokugunyazwa kwe-imeyili nenqubo yokubika ehlose ukusiza ukuvikela izinhlangano ekuthini izizinda zazo zisetshenziselwe ukuhlaselwa okufana nokuphamba, ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi, nokunye ukusetshenziswa okungagunyaziwe. Amaklayenti e-imeyili ayisebenzisela ukuqinisekisa ukuthi i-imeyili ivela esizindeni esichaziwe. I-DMARC ibuye inikeze izinhlangano ukubonakala okuthuthukile kwimilayezo ethunyelwa isuka esizindeni sayo, engakhuphula ukuphepha kwayo kwe-imeyili kwangaphakathi.
Ngokusebenzisa ama-VMC avikelwe yi-DMARC, abathengisi bakhombisa amakhasimende ukuthi inhlangano yabo igxile ekuthatheni izinyathelo ukuqinisekisa ubumfihlo bamakhasimende, kanye nokuphepha okunamandla kwe-imeyili. Lokhu kuthumela umlayezo onamandla ngokuzibophezela kwabo kumkhiqizo nakudumo lwabo.
Ukukhanya Okugqamile Kumabhrendi Wokuthembisana
Ngokukhombisa uphawu lwenhlangano ngqo ebhokisini lokungenayo lomemukeli, ama-VMC kanye ne-BIMI abagcini nje ngokwethula inkomba yokubuka ebonakalayo kodwa futhi banikela nangendlela entsha engasiza izinkampani ukuthi zisebenzise ngokugcwele imali eqoqwe ngaphakathi kwelogo yabo, ukuze kutshalwe imali encane. Ngokunika amandla amakhasimende ukuthi abone uphawu olujwayelekile ebhokisini labo lokungenayo ngaphambi kokuthi bavule i-imeyili, abathengisi bathola ithuba lokusika umsindo ebhokisini lokungenayo eligcwele futhi bashiye ukubonakala komkhiqizo okuningi. Izimpawu ziyizimpawu ezinamandla ezihambisana namakhasimende futhi zisiza ukuqinisekisa ukusebenzisana okungaguquguquki, okuhle. Imiphumela yokuqala evela ku- Izilingo ze-Yahoo Mail BIMI ngamakhulu ababambiqhaza bethembisa, futhi i-imeyili eqinisekisiwe ikhonjisiwe ukuthuthukisa ukubandakanyeka cishe ngamaphesenti ayi-10.
Ama-VMC nawo abiza ngokweqile ngoba akhiwe ngasesiteshini se-imeyili izinhlangano esezivele zitshale imali kuzo futhi zathuthukisa eminyakeni edlule.
Ama-VMC adinga ukusebenzisana kwe-IT
Ukusizakala ngama-VMC, abathengisi kudingeka babambisane neminyango yabo ye-IT ukuqinisekisa ukuthi inhlangano yabo iyahambisana namazinga okuphoqelelwa kwe-DMARC.
Isinyathelo sokuqala ukusetha i-Sender Policy Framework (SPF), eyenzelwe ukuvimbela amakheli we-IP angagunyaziwe ekuthumeleni ama-imeyili asuka esizindeni sakho. Ithimba le-IT kanye nelokumaketha lizodinga futhi ukusetha i-DomainKeys Identified Mail (i-DKIM), indinganiso yokufakazela ubuqiniso ye-imeyili esebenzisa ukubhalwa kwemfihlo kukhiye womphakathi / wangasese ukuvimbela ukuphazanyiswa kwemilayezo lapho isendleleni.
Ngemuva kokuthi lezi zinyathelo seziqediwe, amaqembu abeka i-DMARC endaweni yokuqapha ithrafikhi ye-imeyili, ukukhiqiza imibiko, nokunikeza ukubonakala emilayezweni ethunyelwe isuka esizindeni.
Ukusungula ukuphoqelelwa kwe-DMARC kungathatha izinsuku noma amasonto, kuya ngosayizi wenkampani. Kodwa-ke, ekugcineni kusiza izinhlangano ukuthi ziqinise ukuphepha kwabasebenzisi, zizivikele eningini elikhulu lokuhlaselwa kobugebengu bokweba imininingwane ebucayi, futhi zifanelekele inhlangano ukuthola isitifiketi se-VMC. Izinhlobonhlobo ze blogs nezinye izinsiza eziku-inthanethi ziyatholakala ukusiza izinhlangano ukuthi zilungele i-DMARC.
Njengoba izitifiketi ze-VMC zamukelwa kabanzi ngabathengisi be-imeyili, kungenzeka ukuthi amakhasimende namathemba maduze azolindela uphawu olujwayelekile emabhokisini abo okungenayo e-imeyili. Izinkampani ezithatha izinyathelo zokuqala ukuhlela i-VMC ne-DMARC yazo namhlanje zizozibeka eziqongweni zezihlwele futhi ziqinisekise izilaleli zazo ukuthi zikubeke eqhulwini ukuphepha. Ngokuhlanganisa ukuthembana nakho konke ukuxhumana kwabo nge-imeyili, bazoqhubeka nokuqinisa uhlobo lomkhiqizo nedumela labo nangezikhathi eziguqukayo.
Landa Umhlahlandlela Wokumaketha we-VMC kaDigicert
Tags: I-BIMIngobeI-DMARCUkufakazela ubuqiniso bemilayezo esuselwa esizindeniukuqinisekiswa kwe-imeyiliilogo ye-imeyiliukwethenjwa kwe-imeyililogo yebhokisi lokungenayoukuphingauhlaka lwenqubomgomo yomthumelii-spfizitifiketi zokuthengisa eziqinisekisiwevmcizitifiketi ze-vmc
UMark Packham ujoyine iDigiCert ngoJulayi 2016 futhi wengamela isu lomkhiqizo, uhola gen, ubuholi bokucabanga, isu lokuqukethwe, ubudlelwane bomphakathi, ukumaketha kwedijithali, kanye nobudlelwano babahlaziyi. Uletha isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-20 njengomkhangisi osemaqhinga kanye nomphathi womkhiqizo womhlaba wonke, ehole ukuhlangana kokukhangisa emhlabeni wonke nezinkampani ezinjengeSalesforce.com, iMicrosoft, iVerizon, ne-Abbott.